संविधान दिवसमा प्रधानमन्त्री मोदी प्रमुख अतिथि ! - Everest Dainik - News from Nepal
संविधान दिवसमा प्रधानमन्त्री मोदी प्रमुख अतिथि !
काठमाडौं । ३ असोजमा आयोजना हुने राष्ट्रिय दिवसमा प्रमुख अतिथिका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्त्याइएको छ । संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा भव्य बनाउने सरकारको तयारी छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग बुधबार बालुवाटारमा भएको करिब एक घन्टा लामो एकान्त वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई राष्ट्रिय दिवसको प्रमुख अतिथि बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । जयशंकरले नेपाली प्रधानमन्त्रीको निम्ता भारतीय प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो विषयमा भारतका तर्फबाट छिटै औपचारिक जानकारी आउने अपेक्षा गरिएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।
ओलीले राष्ट्रिय दिवसमा मोदीको आगमन भए नेपाल र भारतबीच बाँकी रहेका तिक्तता एकैसाथ समाधान हुने र विश्वासका नयाँ आधारमा सम्बन्ध अघि बढ्ने सन्देश पठाएका छन् । ‘मोदीले लुम्बिनी भ्रमणमा आउने इच्छा व्यक्त गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रिय दिवसमा सहभागी हुने र लुम्बिनी भ्रमण गर्ने चाँजोपाँजो मिल्न सक्छ,’ कूटनीतिक स्रोतले भन्यो ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री केयर्स फण्डमा पेट्रोलियम कम्पनीहरुले दिए करोडौं रकम
चार वर्षअघि संविधान जारी गर्ने कार्यक्रम स्थगित गर्न मोदीको सन्देश बोकेर जयशंकर काठमाडौं आएका थिए । संयोगले संविधान दिवसको प्रमुख अतिथि बन्न मोदीलाई नेपालको निम्तो उनैले लगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि जयशंकर परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
बैठक सकिएलगत्तै बुधबार राति परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा जयशंकरले अघिल्लो कार्यकालमा मोदीले चारपटक नेपाल भ्रमण गरेको दृष्टान्त दिँदै मोदीको सद्भाव मनन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
३ असोज ०७२ मा नेपालमा संविधान जारी हुँदा भारत असन्तुष्ट थियो । तर, भारतले नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म खुला समर्थन नगरे पनि संवैधानिक जगमा भएका तीन तहको निर्वाचनलाई स्वागत गरेको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि १८ र १९ माघ ०७५ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतका रूपमा काठमाडौं आएकी थिइन् ।
याे पनि पढ्नुस संविधान दिवसः २ सय ६० को कैद सजाय कट्टा, २२ लाई सजाय माफी
त्यही भेटवार्तामा स्वराजले मोदीको सन्देश सुनाउँदै नेपालको संविधानमा भारतको कुनै असहमति नरहेको र सफल निर्वाचनपछिको सरकारसँग भारतले सहकार्य गर्ने बताएकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र उनका समकक्षी मोदीको नेपाल भ्रमणमा उच्च राजनीतिक समझदारी कायम भएको दुवै पक्षले बताउँदै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा।
राजन भट्टराईले मोदीलाई आमन्त्रण गरिएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटमा यस्तो कुनै चर्चा भएन, अलग्गै भेट्दा कुराकानी भएको हुन सक्छ । तर, त्यसमा भएको प्रगतिबारे म जानकार छैन,’ भट्टराईले भने । आयोग बैठकका लागि काठमाडौं आएका भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने निर्णय भइनसकेका विषयमा आफूसँग जवाफ नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘निर्णय नभइसकेको हुनाले यस सम्बन्धमा जानकारी दिन सक्दिनँ,’ आचार्यले भने ।
याे पनि पढ्नुस मोदीले किने ३ करोड बढीको कार, गोली र ग्रिनेडको पनि असर नहुने
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा १२ माघ ०५५ मा राजा वीरेन्द्र प्रमुख अतिथिका रूपमा दिल्ली गएका थिए । त्यसवेला अटलबिहारी बाजपेयी भारतका प्रधानमन्त्री थिए । त्यसअघि र पछि भारतले गणतन्त्र दिवसमा नेपाली सरकारप्रमुखरराष्ट्रप्रमुखलाई बोलाएको छैन । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: नरेन्द्र मोदी, प्रमुख अतिथि, संविधान दिवस